Date My Pet » Misy zavatra toy izany Araka ny ady tsara amin'ny Fifandraisana?
Last nohavaozina: Sep. 17 2020 | 4 min namaky
Na dia fanehoan-kevitra dia raisina tsara ho an'ny fifandraisana, dia nisy toy ny zavatra toy ny ady tsara amin'ny fifandraisana? Eny misy, Tsy nampino. Ady manampy ny fifandraisana mba hitombo ho toy ny mpivady hahafantatra tsara kokoa ny hafa. Koa satria dia zavatra iray izay tsy azo ialana, mpivady mila mianatra ny fomba hiady amim-pahamarinana.
Ny fahaiza-miady amim-pahamarinana dia be zava-dehibe noho ny fahafantarana ny antony ny ady nipoaka tany an-toerana voalohany, na dia manana ady niasa ho tsy mendrika izany. Maka fotoana avy rehefa mahatsapa toy ny mpiara-miasa iray izy ireo momba ny hahavery azy no tena zava-dehibe, satria tsy manao izany mety hitarika ho amin'ny fanehoan-kevitra lehibe kokoa, izay azo nosorohina.
Ankoatry ny, zava-dehibe ny manao ny mpiara-miasa hafa mihevitra azy ireo ho reny. Tsy manana niantsoantso lalao, rehefa hamaha na inona na inona tsy manampy, toy ny naka fanahy tahaka ny mety ho foana.
Rehefa nandritry ny ady tamin'ny mpiara-miasa iray ny, hitady vahaolana foana ny ady amim-pisakaizana, fa tsy miady mba handresy. Na izany aza, satria io no mora anefa ilay izy, misy fitsipika roa, izay, raha nanaraka, dia afaka manao ny marina fa mendrika izany ady.
Mihazona fahatezerana io dia tsy mety; fa hametraka ny fahatezeranao manerana ny mpiara-miasa
Ny hatezerana dia fihetseham-po rehetra, izay midika fanaintainana, alahelo, menatra ianao, ary na dia nenina. Mety ho vokatry ny toe-javatra izay nitranga ela lasa izay zava-nitranga na ny amin'izao fotoana izao. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona tsy mahafantatra ny fomba hiatrehana ny fahatezerana.
Ny hatezerana dia tokony ho hita toy ny fanambarana, ny fihetseham-po izay manampy ny mpiara-miasa iray ho tonga amin'ny vahaolana ho an'ny olana iray. Ary noho izany, mandinika ny fahatezerana dia hanampy fifanarahana amin'ny antony ny tohan-kevitra ary koa ny vahaolana kely mora foana.
Ny fanomezana ny kapoka ambany dia tsy mahatonga ny olona iray ho mahery fo
Fanehoan-kevitra dia tsy làlana mba hitaiza ny mpiara-miasa ny fahalemena, zava-miafina, na dia ny handrava taloha. Izany dia ambany kapoka, ary mampiseho fa na misy vidiny loatra eo ny hoditra, noho izany, mahatsapa fa ilaina ny hamely ny mpiara-miasa mba hahatonga ny tenany hahatsapa tsara kokoa, na dia kanosa izay tsy maintsy miandry ho tohan-kevitra hamarana ny fifandraisana.
Kanosa toy izany asa atao amin'ny ny fikasana mahatonga fanaintainana na ny mpiara-miasa hafa dia tokony ho sorohina amin'ny lany rehetra. Tsy mikapoka olona etsy ambany ny fehin-kibo, ny mpiara-miasa am-pitoniana no iasàny na ny zavatra mandratra azy. Ary izao no mahatonga ny olona iray ho mahery fo.
Aza adino ny milaza ny ahiahiny, fankasitrahana, fankasitrahana, sy ny fiaraha-miory
Na iza na iza manana ady amin'ny namany, nefa tsy nilaza akory va ny ambony dia manao na inona na inona tsara. Tena zava-dehibe ireo fihetseham-po, indrindra ho an'ny olona amin'ny fifandraisana, toy ny milaza izany fihetseham-po ireo dia hanampy ho azo antoka fa tsara foana mpivady ady.
Tafiditra fankasitrahana tsy maharary ny mpiara-miasa iray, satria fantany fa ny mpiara-miasa manana zo ara-drariny ny fitsaboana. Mba hangoraka amin'ny olona iray, ny iray dia ny hijery ny toe-javatra avy amin'ny hafa ny fomba fijerin'ny olona.
Aza mivazavaza, niantsoantso, ary ny fanevatevana
Efa Nisy nahita ny tenany amin'ny toe-javatra izay tsy afaka ny tsy milaza ny zavatra ratsy rehetra, rehefa tezitra, nefa fantany tsy mety, fa tezitra loatra ny mieritreritra? Ady manao izany ny olona, indrindra rehefa miady tsy ara-drariny.
Zava-dehibe ny haka ny fotoana alohan'ny mamaly ny fahatezerana. Aza maika ny hiteny toy ny teny ho blurted fa tsy mety ho naka indray, na inona na inona. Mivazavaza sy milelalela ny havokavoka iray avy sy ny mpiara-miasa iray manevateva ihany no mitondra ho very ny olona iray ny feon'ny, taitra ny ankizy sy ny angamba ny sisa manodidina.
Tsy miady amin 'ny tanjona ny handresy na ho ny iray eo ankavanana
Rehefa miady ny mpiara-miasa iray, Tsy miezaka mafy mba ho mpandresy, toy ny mpiara-miasa fotsiny ny fanaovana izany dia mety ho ny anankiray teo amin'ny ratsy. Miezaka mafy mba ho tsara mandeha fotsiny mba hanehoana ireo fahatsapana ho tsy mahavita, ny tsara fanahy ny olona izay tsy te-ho diso.
Inona no ny fampiasana ny nandresy tamin'ny ady, fa very ny mpiara-miasa iray? Kosa no soa izany? Tsy tokony ho toy izany variana amin'ny fahazoany fandresena fa tsy mahita tena ny mpiara-miasa no vokany. Mitaky ezaka be dia be mba hiala kely ary hijery ny zava-misy, ny mahita ny olona iray dia afaka ireny no mahatonga ny tsy fifanarahana.
Aza miezaka hanome tsikera mahasoa, izany dia tsy mety!
Rehefa miady, tsy mitsikera ny hafa mpiara-miasa, pieritreretana izany dia manampy azy ireo, satria tsy. Na iza na iza mandray anjara amin'ny ady ara-dalàna dia tezitra mafy, ary ny fanakianana nomena Tamin'io fotoana io dia natao mba mampijaly. Ny hany zavatra hanatanterahany izany dia ny hahatonga ny mpiara-miasa iray mahatsapa ho toy ny efa nanao zavatra tsy azo avela sy tsy takatry ny saina.
Fa, izany no tokony hatao mba nitaraina ho mpiara-miasa amin'ny hafa amin'ny alalan'ny filazana azy ireo ny zavatra iray no maniry amin'ny ho avy.
Araka izay rehetra voalaza sy vita, peratra zavatra iray tena. Misy zavatra toy izany toy ny ady ara-drariny, izay tena zava-dehibe ho an'ny olona eo amin'ny fifandraisana. Ny iray dia ny hianatra avy amin'ny fahadisoana tsy fahalalinan-tsaina afa-tsy izay mety ho nataony mba hanomboka ny ady, fa ny zavatra azony atao mba ho tsara kokoa amin'ny ho avy. Na iza na iza dia afaka mifehy ny tsara sy ny fahaiza-manao ara-drariny ny ady dia azo antoka fa hahazo ny tena faly lava sy fifandraisana.